ကြားသိရသမျှ Archives - Lodarya
မင်္ဂလာဆောင်ထားတာက (၃)လပဲရှိသေးတယ်. . . မိန်းမဖြစ်သူက ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်လုပ်. . .ယောင်္ကျားလုပ်သူက စနိုက်ကျော်မနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ အဖြစ်…!
ကျွန်​မတို့ယူထားတာ 3လနီးပါးရှိ​နေပါပီ…3လအတွင်းမှာ လင်​မယားသဘာဝ စကားအနည်းငယ်​များတာ​လေး​တော့ ရှိတာ​ပေါ့…ကျွန်​မက အလုပ်​သွားတယ်​ သူက သူငယ်​ချင်း​တွေနဲ့အ​လေလိုက်​တယ်​…လူငယ်​မို့လို့ ဒါကို အပြစ်​မမြင်​ပါဘူး…ကျွန်​မအ​မေကအစ သူ့ကို သားသမီးအရင်းလိုသ​ဘောထားပါတယ်​…. ဒါက သူနဲ့ကျွန်​မပါ. အဲ့လိုနဲ့​နေရင်း​နေရင်း သူ့အချိုး​လေး​တွေ စ​ပြောင်းလာပါ​တော့တယ်​…လိုင်း​ပေါ်က ​ကောင်​မ​တွေနဲ့ ရူပ်​လာပါတယ်​…ဒါကိုကျွန်​မသိ​တော့ ​ပြောပြပါတယ်​…သူ့ဘက်​က ပြင်​ပါ့မယ်​ဘာညာ​ပြော​တော့ သူ့ကိုချစ်​တဲ့စိတ်​နဲ့ခွင့်​လွှတ်​​ပေးထားပါတယ်​…တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျွန်​မအလုပ်​က ​မော​မောပမ်းပမ်းနဲ့ပြန်​လာတာ​တောင်​ ကြိုမယ့်​​ယောကျာ်း […]
ကျောက်တန်းမြို့နယ်အတွင်း ဓါးထိုးမှု(၁)မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ ကြားသိရပါသည်။ ရန်ကုန် ဧပြီ ၆ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တန်းမြို့၊ အနောက်ပိုင်းရပ်ကွက်နေ ဒေါ်—-သည် ၅.၄.၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၂၂၂၀ အချိန်တွင် နေအိမ်၌ရှိနေစဉ် ၎င်း၏သားဖြစ်သူ ခင်မောင်ချိုမှာ တစ်ရပ်ကွက်တည်းရှိ လမ်းမတော်လမ်း၊ ဘီယာမလေး စားသောက်ဆိုင်အနီးတွင် သေဆုံးနေကြောင်း ကြားသိရသဖြင့် သွားရောက်ကြည့်ရှုရာ […]
ကျောက်စိမ်းစေတီက မိုက်ရိုင်းသော မောင်းတံစောင့်ဘီလူး
။ကျောက်စိမ်းစေတီက မိုက်ရိုင်းသော မောင်းတံစောင့်ဘီလူး ကျွန်တော်ရွှေမန္တလေးကို သူငယ်ချင်းများနဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ရောက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ မေမြို့သားတွေကိုယ့်မြိုမဟုတ်တော့ တစ်လမ်းမောင်းဆိုင်းဘုတ်ကိုသတိမမြင်မိလို့ ကားလေးခေါက်တည်မိတယ်။ တာဝန်အရယာဉ်ထိန်းက သူ့ တာဝန်သူကြောင့်လိုင်စင်တောင်းတယ်။တစ်ခေါက်ပြန်လာယူဖို့ ကလည်းမလွယ်တာကြောင့်နောင်သတိရှိရှိမောင်းပါ့မယ် လို့ ပြောလည်းတောင်းပန်မရတဲ့ယာဉ်ထိန်း ကြောင့် ပါလာတဲ့ငွေနှစ်သောင်းကျပ်ဒဏ်ကြေးဆောင်ခဲ့ရတယ်။ ဒါလည်းကျွန်တော့်အပြစ်ပါ။ပြီးသွားပါပြီး စိတ်ပျက်ပျက်နဲ့ ပြန်မယ်အလုပ် သူငယ်ချင်းဆန္ဒအရ ကျောက်စိမ်းစေတီသို့ ရောက်ခဲ့တယ်။ ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ”””’ညီလေး […]
သူခိုးဖမ်းမယ့် CCTV လေးလုံးကို ဖြုတ်ခိုးတဲ့သူခိုး
သိုလှောင်ရုံဝန်ထမ်းဖြစ်သူမှ CCTV(၄)လုံးအား ဖြုတ်ခိုးယူ၍ ဖမ်းဆီးအရေးယူထား နေပြည်တော်၊ ဧပြီ ၅ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီအချိန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပုဇွန်တောင် မြို့နယ်နေ “ရွှေရွက်လှေ” အထည်ချုပ်စက်ရုံမန်နေဂျာဖြစ်သူ ဦးခင်နိုင်(၆၄)နှစ်သည် နေအိမ်၌ ရှိနေစဉ် အဆိုပါအထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် သူခိုးမိထားကြောင်း […]
အိမ်က ကလေးတွေအတွက် တခုခုဝယ်မိရင် မိဘမဲ့ ကလေးလေးတွေအတွက်တခုခုလေး ပိုဝယ်ခဲ့ပါဆိုတဲ့ “ပိုဝယ်ခဲ့ပါ “အစီအစဉ်လေး ..ကောင်းလိုက်တာဗျာ
အစကတော့ သူတို့ကို ဆိုင်ထဲက မောင်းထုတ်ကြတယ်. . ..သေချာသိလိုက်ရမှ မျက်ရည်ဝဲရတဲ့ ‘ပိုဝယ်ခဲ့ပါ” ပိုဝယ်ခဲ့ပါစာသားလေးမြင်တော့ ။ကိုယ်လည်း ဘာကို ပိုဝယ်ခဲ့ရမှာလဲ ပေါ့။ မြောက်ဥက္ကလာ အတွင်းက စာရေးကိရိယာ ဆိုင်ရှေ့မှာ လူငယ်လေးတွေက ပိုဝယ်ခဲ့ပါ စာတန်းပါ အကျီ င်္လေးတွေ နဲ့ ပိုဝယ်ခဲ့ပါ အစီအစဉ် […]
သိန်း၁၅၀၀၀ကံထူးရှင်ဇနီးမောင်နှံ၏ သိန်း ၂၃၀ အလှူကြီး
သိန်း၁၅၀၀၀ကံထူးရှင်ဇနီးမောင်နှံ၏ အလှူ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ သာဓုအလီလီခေါ်ပါတယ် ကျောင်းကုန်းမြို့ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက် (၆၅)ကြိမ်မြောက် ဆွမ်းဆန်တော်လောင်းလှုပွဲကို သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင်ဆု ဆွတ်ခူးရရှိသွားသော မောင်ပြည့်ဖြိုးမောင်+မလွင်လွင်ဦး (သမီး)မပန်းအိသဇင် မိသားစုတို့မှ ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီး(ဦးထိန်လင်းအောင်)အား ရည်စူးပြီးနှစ်ဘက်မိဘများကိုအမှုးထား၍ ကျောင်းတစ်ကျောင်း လျှင် တစ်သိန်းကျပ် ကျောင်း (၂၃၀) ကျောင်းအတွက် ကျပ်သိန်း နှစ်ရာ့သုံးဆယ်ကို အမှတ်(၃)ရပ်ကွက် ဗဟိုလ်မင်္ဂလာမဏ္ဍပ်ကြီး […]
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ပျောက်သွားခဲ့ရင် ဒီလိုပြန်လျှောက်ရင် ဒီနေ့လျှောက် ဒီနေ့ရပါတယ်
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ပျောက်သွားခဲ့ရင် ဒီလိုပြန်လျှောက်…ဒီနေ့လျှောက် ဒီနေ့ရတယ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ပျောက်သွားခဲ့ရင် ဒီလိုပြန်လျှောက် သင်ကိုင်ထားတဲ့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုရင် ဘာမှစိတ်ပူမနေနဲ့ ဒီလိုလေးပြန်လျှောက် ဒီနေ့လျှောက် ဒီနေ့ပြန်ရတယ်။ မှတ်ပုံတင်မူးရင်ရယ် မိတ္ထူရယ် ယာဉ်ထိန်းထောက်ခံစာရယ်ပဲလိုတာ အဲ့ဒီသုံးမျိုးစုံရင် ကညနမှာပြန်လျှောက် ပြန်ရရော။ အဲ့ တစ်ခုတော့ရှိတယ် ယာဉ်ထိန်းထောက်ခံစာဟာ မိမိရဲ့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် […]
လက်မှတ်မှာဈေးနှုန်းထည့်ရေးပေးဆိုတော့ ရေးပေးလို့မရဘူးတဲ့…၆၅၀၀ တန်လက်မှတ်ကို ၁၀၀၀၀ ပေးဝယ်နေရတဲ့ ပြည်သူ့အသံ..
ဘယ်မှာလဲ အရေးယူမှု. ဘယ်သူတာဝန်ယူမလဲ ???? လေကန်တာပဲရှိတယ် ဘယ်သူမှအရေးမယူကျဘူး. Shareပေးကျပါအုံး.. အထက်လူကြီးတွေ အိပ်ရာကနိုးလာအောင် ဒီနေ့ကားလက်မှတ်လေးတစောင်သွားဖြတ်ပါတယ် ဒီလက်မှတ်ရဖို့၃လပိုင်း၂၈ရက်နေ့ထဲကဖုံးဆက်ပီးနေ့တိုင်းမေးပါတယ်… သူတို့ကလဲပြန်ပြောပါတယ်၎လပိုင်း၅ရက်နေ့မှစရောင်းပါမယ်တဲ့။ ၄လပိုင်း၁၁ရက်နေ့အတွက်ကိုဖြတ်တာပါ ၄ရက်နေ့ညနေမှာသူငယ်ချင်းကိုသွားဖြတ်ခိုင်းတော့လက်မှတ်တွေမရှိတော့ဘူးကုန်ပီတဲ့… ဒီမနက်၁၁နာရီသွားဖြတ်တော့အလယ်ခုံဘဲရမယ်တဲ့ ယူမယ်ပေါ့ဆိုတော့၁၀၀၀၀ကျပ်တဲ့ ဘာလို့လဲ၆၅၀၀ကျပ်ပါ ဘာလို့ဈေးတက်တာလဲဆိုတော့ရောင်းတဲ့မိန်းခလေးကမျက်နှာမာမာနဲ့၃လပိုင်း၂၀ကျော်ထဲကလက်မှတ်ဈေးတက်နေပီတဲ့ okဒါဆိုလဲရတယ်လက်မှတ်မှာဈေးနှုံးထဲ့ရေးပေးဆိုတော့ရေးပေးလို့မရဘူးတဲ့ အံ့အြတာဆိုတာ ဒါမျိူးတွေလုပ်နေတာ ဘယ်သူ့ကိုပြောပီးဘယ်သူ့ကိုတိုင်လို့ရလဲဆိုတာပါ မူရင်းတင်သူ.. […]
ကလေးငယ်တွေပါ သတ်သွားတဲ့ ၈ လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုဖြစ်
မတ်လ ၅ ရက်၊၂၀၁၉ – ၈ လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုဖြစ် “လက်နက်ကိုင်က အိမ်ရှင်ဆီမှာ ဆိုင်ကယ်တောင်းစီးတာ မပေးလို့ဆိုပြီး အရပ်သား ၈ ဦး ပစ်သတ်ခံရမှု အနန်းကွင်းတွင် ဖြစ်ပွား” Update News မတ်လ ၅ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် KNU-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ ဝင်းရေးမြို့နယ်(ကရင်ပြည်နယ် […]
ဖေ့ဘွတ် ပေါ်က ချစ်သူကို ယုံစားပြီး ခရီးဝေးကနေ ချိန်းတဲ့နေရာထိ လိုက်လာမိတဲ့ ၁၄ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးရဲ့ အဖြစ်…!
April 5, 2019 Lodar Ya 0
ကောင်မလေးက အသက်(၁၄)နှစ်။ နာမည်က မ​အေးသဇင်​ဦး ၁၄နှစ်​ (ဘ)ဦး​အောင်​မြင့်​ (မိ) ​ဒေါ်​ချောစု နာဂဒူး​ကျေးရွာ ​ကော့ကရိတ်​မြို့ ကရင်ပြည်နယ်ကပါ။ ခေါ်ဆောင်တဲ့ ကောင်လေးကတော့ အောက်က အကျီ င်္အနီနဲ့ ပုံပါ အကောင့်ပိုင်ရှင်ပါ။ သူတို့ဟာသူတို့ ဘယ်လိုချိတ်ဆက် အဆက်အသွယ်လုပ်ပြီး လာခဲ့သလဲတော့မသိဘူး။ မေးမြန်းချက်အရ အတိုချုပ်ပြောရရင် ကောင်လေးနဲ့ […]